Ikholeji ye-Skidmore: I-GPA, izikolo ze-SAT kunye noMTHETHO WESIKOLO
I-Skidmore GPA, iSAT kunye ne-ACT Graph
I-Skidmore yeKholeji ye-GPA, izikolo ze-SAT kunye noMTHETHO oQinisekisa ukungena. Idatha efanelekileyo yeCapepex.
Ulinganisa njani kwiKholeji yaseSkidmore?
Ingxoxo yeMigangatho ye-Admissions ye-Skidmore:
Ikholeji ye-Skidmore yikholeji yekhethelo ye-liberal eyamkela kakuhle phantsi kwesiqingatha sabo bonke abafake izicelo. Ukuze ungene, mhlawumbi uya kufuneka iziklasi zamabanga aphakamileyo kunye namanqaku ovavanyo olulinganiselweyo aphezulu kakhulu ngaphezu komyinge. Kwigrafu ngasentla, amachashaza ahlaza okwesibhakabhaka kunye aluhlaza amelela abafundi abamkelekileyo. Uyabona ukuba abafaki-zicelo abaninzi abaphumelele banomlinganiselo ophakamileyo wesikolo we "B +" okanye ezingcono, izikolo ezidibeneyo ze-SAT malunga ne-1200 okanye ngaphezulu (RW + M), kunye ne-ACT izikolo ezingamalungu angama-26 okanye ngaphezulu.
Uya kuphawula ukuba amanqaku aphakamileyo kunye neziphumo zokuvavanya ngokuqinisekileyo azikho kuphela izinto eziqwalaselwa ukuba zenziwe kwi-Skidmore. Kukho amacatshana ambalwa ebomvu (abafundi abatshitshisileyo) kunye namachashaza aphuzi (abafundi abadibeneyo) baxutywe kunye nohlaza oluhlaza kunye nolwazi oluhlaza okwesibhakabhaka kulo lonke igrafu. Abafakizicelo abaninzi babenamazinga kwaye bavavanya amanqaku abajoliswe kwiCopmore College kodwa abazange bavunyelwe. Uyabona ukuba ngokuphambene nakwezinye iindawo zinyaniso - abafundi abambalwa bamkelwe ngamanqaku okuvavanya kunye namanqaku ambalwa ngaphantsi kwesiqhelo. Inkqubo yokumkelwa kwe-Skidmore isekelwe kwiinkcukacha zamanani. Ikholeji isebenzisa isicelo esiqhelekileyo kwaye idibeneyo ngokupheleleyo . Njengoko iwebhusayithi ye-admissions ye-school ithi, "I-Skidmore ifuna abafundi abanekhono lokufunda, ukufuna ukwazi, ukucinga, ukuzimisela, ukuzinikela ekufundeni kunye nomnqweno wokuba negalelo kuluntu oluzibophezele ekuqinisekiseni ubuqu kunye nobuzwe."
Ikholeji iya kukhangela ubuchule bokufunda ezikolweni zakho eziphakamileyo , kungekhona kuphela amabakala akho. Kwakhona, baya kukhangela isicatshulwa esiphumeleleyo , imisebenzi yentshukumo echaphazelekayo, impendulo emfutshane , kunye neencwadi ezinamandla zinconywa . I-Skidmore inikezela ngodliwano-ndlebe olukhethiweyo , kwaye abafake izicelo baya kuba bulumko ukuba basebenzise eli thuba.
Ukuze ufunde kabanzi malunga neKholeji ye-Skidmore, ii-GPA zezikolo eziphakamileyo, izikolo ze-SAT kunye nama-ACT, amanqaku angancedisa:
Iprofayile ye-Admissions ye-Skidmore yeKholeji
Ukuba Uthanda iKick College, Unako ukuthanda ezi zikolo:
Ikholeji ye-Ithaca: Iprofayili | I-GPA-SAT-ACT IGrafu
Iklasi yeZiqu zintathu: Iprofayili | I-GPA-SAT-ACT IGrafu
I-Oberlin College: Iprofayili | I-GPA-SAT-ACT IGrafu
Amanqaku kunye neeList Ebonisa iCopmore College:
Ifoto yoTyelelo lweKholeji yaseSkidmore
Iikholeji zaseNew York
I-Oswego GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Izibalo zeeNkcazo zeeKholeji zeBakala
Izibalo zeeNyuvesi zaseMichigan
Indlela yokuqhuma kwi-Archeology
Incwadi ebhaliweyo yokuBhala: iiNcwadi zokuLungiswa kweNkundla
Kutheni utywala iChibhini lakho lokubhukuda lingenokuba yingozi
Umcimbi omnyama: Iyiphi indima edlala kwiiGalaxies?
Intsingiselo yoLuntu kwiKhemistry
Ziziphi iimpawu eziqhakamshelweyo zokuVuleka kweVolleyball?
Ingaba uyandazi? Iingcaphuno Ezikunceda Ukugubungela